နိုင်ငံတကာသတင်း | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
Category Archives: နိုင်ငံတကာသတင်း
The 5th Extraordinary OIC Summit on Palestine & Al-Quds Al-Sharif in Jakarta March 7, 2016 ENGLISH, Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, နိုင်ငံတကာသတင်း The Government of the Republic of Indonesia will be hosting the5th Extraordinary Organization of Islamic Cooperation (OIC) Summit on Palestine and Al-Quds Al-Sharif in Jakarta on7March 2016, in response to the request of H.E. Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. The Summit will be preceded by Senior
Read More Palestinian President Calls for the Enforcement of International Law March 7, 2016 ENGLISH, Featured Posts, နိုင်ငံတကာသတင်း Jakarta, 7/3 (OIC-ES2016) – Palestinian President Mahmoud Abbas called for the enforcement of international law in facing Israel aggression against Al-Quds Al-Sharif in Jerusalem. Mahmoud Abbas also reiterated that for more than five decades Israel has been damaging Islamic and Christian holy sites in Al Quds Al Sharif. “The Israeli government did
Read More ဒေသတွင်း ပဋိပက္ခ အဆုံးသတ်ရေး အီရန်နှင့် တူရကီ လက်တွဲမည် March 6, 2016 အာရပ်ကမ္ဘာ, နိုင်ငံတကာသတင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ အဆုံးသတ်စေရေး ပူးပေါင်းလက်တွဲ လုပ်ဆောင်ကြဖို့ကို အီရန် (Iran) နဲ့ တူရကီ (Turkey) ခေါင်းဆောင်တွေက တောင်းဆိုလိုက်ကြကြောင်း VOA မြန်မာသတင်းမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ “အီရန်နဲ့ တူရကီ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ အချင်းချင်းကြား သတ်ဖြတ်နေတာတွေကို အဆုံးသတ်စေရေး လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်တယ်”လို့ တူရကီ ၀န်ကြီးချုပ် Ahmet Davutoglu က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အီရန်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ စနေနေ့က ပူးတွဲသတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲအတွင်း တူရကီ ၀န်ကြီးချုပ်က “အခုလို လက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုက ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ အဆုံးသတ်စေရေးမှာ ထိရောက်ပြီး အကျိုးရှိစေမှာ ဖြစ်တယ်”လို့လည်း ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အီရန် ဒု-သမ္မတ
Read More ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ (၃၁) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ စတင် March 1, 2016 ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း ဂျနီဗာ (Geneva) မှာ ကျင်းပတဲ့ (၃၁) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်ရေး မဟာမင်းကြီး Zeid Ra’ad al Hussein က “လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေတွေကို အစိုးရတချို့က ရေတိုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေ တိုးလာနေတယ်”လို့ သတိပေးလိုက်ကြောင်း VOA မြန်မာပိုင်း သတင်းဌာနက ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ မဟာမင်းကြီး Zeid Ra’ad al Hussein က နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေတွေကို တစ်စစီ ဖြိုချဖျက်စီး ခံနေရတာကိုလည်း လွန်စွာစိုးရိမ်ကြောင်း သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပဋိဉာဉ် စာတမ်းကြီးကို နိုင်ငံအတော်များများက သူတို့ရဲ့
Read More အကောင်းဆုံး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတို အော်စကာဆု ပါကစ္စတန် အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ ရရှိ March 1, 2016 ကမ္ဘာကျော်ကြား မွတ်စလင်များ, နိုင်ငံတကာသတင်း ပြီးခဲ့တဲ့ အော်စကာ (Oscar) ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲမှာ ပါကစ္စတန် (Pakistan) အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာ ရှမီးမ်အိုဘေ့ချိနွိုင် (Sharmeen Obaid-Chinoy) က အကောင်းဆုံး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတို အော်စကာဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သူမရဲ့ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ရရှိတဲ့ အော်စကာဆုဖြစ်ပြီး ပါကစ္စတန် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ အော်စကာဆု (၂) ကြိမ် ရရှိသူအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ရှမီးမ်ဟာ ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးအဖြစ်လည်း လူသိများသူပါ။ သူမဟာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်း အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရပုံကို နိုင်ငံတကာက သိရှိအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သူအဖြစ် လူသိများပါတယ်။ (၂၀၁၆) ခုနှစ် အကောင်းဆုံး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတို အော်စကာဆုကိုတော့ သူမ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “A